Manchester United oo kansashay kulankii ay shalay la ciyaari lahayd Stoke City & Sababta kulankan loo baajiyey oo walwal hor leh abuuraysa – Gool FM
(Manchester) 10 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kansashay kulankii saaxiibtinnimo ee ay la ciyaari lahayd shalay Stoke City kaddib markii macallinka naadiga Stoke laga helay caabuqa COVID-19.
Man Utd ayaa lagu qasbay inay baajiso ciyaartii saaxiibtinimo oo ay kula ciyaari lahaayeen Stoke City garoonkooda tababarka Talaadadii shalay kaddib markii tababarihii kooxda Championship-ka ee Michael O’Neill laga helay faafaha Coronavirus.
Warbixin ay soo saartay kooxda heerka labaad ayaa lagu yiri: “Stoke City waxay xaqiijin kartaa in tababare Michael O’Neill uu ku dhacay Coronavirus kaddib baaritaannadii la sameeyay Isniinta (June 8).
“O’Neill lagama helin xanuunkan shantii baaritaan ee hore, haatan waxa uu geli doonaa karantiil, isagoo xiriir dhanka qadka ah la sameyn doona ciyaartoydiisa iyo shaqaalaha tababarka.
“Caawiyaha Tababaraha ee Billy McKinlay ayaa sii wadi doona tababarka, iyadoo Stoke City ay isku diyaarinayso kulanka ay la leedahay Reading ee 20-ka bishaan June.”
Dhinaca kale kooxda uu hoggaamiyo macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa soo kabasho deg deg ah u rajaysay macallinka Stoke, waxaana arrintani ay abuuraysaa walwal hor leh oo ku aaddan in weli uusan dalka Ingiriiska ka suulin faafaha Coronavirus.
Kooxda Manchester United ayaa maadaama ay kansashay kulankii Stoke, haatan waxa ay kulan saaxiibtinnimo isbuuca soo socda ku ballansadeen West Brom.
Garoonka Old Trafford kooxda ka arrimisa ayaana kulankeeda ugu horreeya ee dib u soo laabashada horyaalka Premier League waxa ay 19 bishaan June la ciyaari doontaa naadiga Tottenham oo uu wato macallinkoodii hore ee Jose Mourinho.
Arsenal oo ka mid ah shan kooxood oo ka wada dheela Premier League, kuwaasoo wada doonaya saxiixa Kabtanka PSG ee Thiago Silva